Monthly Bonus For August 2020 ? Super ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ni Ni Lwin (FB000604) Khin Khin Latt (FB000177) Ei Ei Mon (FB000923) Yu Yu (FB001051) Htet Htet Aung (FB001202) Zun Myat Noe (FB005957) Nan Pyae Pyae (FB001165) Han Ni Htet Htet Oo (FB000701) Shwe Yee Win Shwe (FB000178) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Agent တို့ August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 600 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (1) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For August 2020 ? Super ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Thet Thet Aung (FB004574) Chit Chit Soe (FB000033) Tin Moe Thu (FB000101) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Agent တို့ August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 600 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (1) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For August 2020 ? Super ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nant Mya Khwar Nyo (FB001445) Soe Soe Kyi (FB001293) Zin Mar Phyo (FB001278) Aye Thida (FB000292) Kay Zin Thaw (FB001270) Myo Nandar Aye (FB000478) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Agent တို့ August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 600 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (1) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For August 2020 ? Super ? Beaute Cafe အထုပ် 110 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Wai Kyipyar Zaw (FB002603) Beaute Cafe အထုပ် 100 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Hnin Wai Soe (FB000050) Ni Ni Lwin (FB000604) Wai Nwe Soe (FB002688) Khin Khat Khat Khing (FB006431) Thandar Oo (FB002308) Khin Yu War Htun (FB000023) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Agent တို့ August လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 110 ကျော်နှင့် 100 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (7) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Super ? Beaute Cafe အထုပ် 130 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyo Nyo Mar (FB000719) Beaute Cafe အထုပ် 120 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Thin Thin Naing (FB001456) Beaute Cafe အထုပ် 100 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Chaw Su Myat (FB000038) Mi Mi Ko (FB001314) Moh Moh Aung (FB001977) Myat Hsu Mon (FB004722) Sandar Myo (FB004160) Yin Mar Linn (FB000686) May Su San (FB001269) Htet Htet Khaing (FB009340) Hnin Yee Phway (FB000494) Shwe Zin Khaing (FB000658) Awaddy Shein (FB000244) Ei Ei Mon (FB000923) Point Thae Mon (FB000498) Moe Win Tun (FB001137) Pann Ceasar (FB001138) May Thet Cho (FB001671) Khin Myo Nwe (FB000317) Sai Thurein Than Swe (FB002009) Ni Lar Tin Tun (FB003994) Nan Thidar Nwe (FB008281) Ei Mon Zar (FB000349) Daw San Mai (FB001862) Wai Nwe Soe (FB002688) L Mar Kyaw Win (FB004046) Theingi Tun (FB001117) Khin Htay Myaing (FB006339) Myint Myint Htay (FB002498) Thandar Aung (FB002494) Nway Nway Mon (FB002344) Phwe Hnin Phyu (FB001105) Khin Myat Swe (FB000725) Ju Jue Zan (FB005233) Cho Cho Lwin (FB006525) Khaing Yadanar Htain Htain Aung (FB004010) Novella (FB005989) Ti Tar Tar (FB000832) Win Win Myat (FB-001672) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 130 ကျော် 120 ကျော် 100 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (7) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 360 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Thet Thet Aung (FB000006) Nwet Mar Win (FB000441) Htet Htet Aung (FB001202) Htet Htet Aung (FB000011) Aye Thidar Cho (FB001996) Thandar Soe (FB003172) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Agent တို့ !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 360 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (1) သိန်း (2)သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (15) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကိုဆပ်ပြာတုံး 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Thet Thet Aung (FB004574) Thet Htar Wai (FB000144) Ni Ni Lwin (FB000604) Su Thet Kay Khaing (FB002015) Khin Mar Win (FB000424) Nandar Lin (FB000683) Shwe Sin (FB000595) Thonn Thu Han Thar (FB001687) Ruby Aye (FB000092) Zin Mi Mi Ko (FB000623) Shwe Yee Win Shwe (FB000178) Myo Thandar Aung (FB000047) Zin Mar Phyo (FB001278) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Agent တို့ !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 600 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (1) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို New Skiin Supplement ဘူး 100 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Zu Mon Hlaing (FB000152) Awaddy Shein (FB000244) Thet Htar Wai (FB000144) Khaing Myat Oo (FB000052) Yu May Aung (FB000048) Thae Thae (FB000004) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Agent တို့ !!! June လအတွင်း New Skiin Supplement ဘူး 100 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (1) သိန်းကျပ်တိတိနှင့် ???? New Skiin Supplement (5) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Ketchup (30) Sheets ထုပ် 200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Ni Ni Lwin (FB000604) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Ni Ni Lwin !!! May လအတွင်း Ketchup (30) Sheets ထုပ် 200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ?Super Agent? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano Spray ဘူး 100 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Hnin Wai Soe (FB000050) Su Mon Mon Zaw (FB000007) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Agent တို့ !!! June လအတွင်း Nano Spray ဘူး 100 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Agent? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (၈) သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။